ခင်မောင်တိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Interviews & Profiles » ခင်မောင်တိုး
Posted by kai on Nov 15, 2012 in Interviews & Profiles, Myanmar Gazette | 27 comments
စတီရီယို ခေတ်ဦး အဆိုတော် တစ်ဦး ဖြစ်သည့်အပြင် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ဖြင့် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သူ အဆိုတော် ခင်မောင်တိုးသည်နိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့ နံနက်(စကာင်္ပူစံတော်ချိန်)(၈နာရီ ၂၀မိနစ်) အချိန်က စင်ကာပူ၌ ဆေးကုသခံနေရာမှ ကွယ်လွန်သွားပါသည်။
ခင်မောင်တိုး အမှတ်တရအဖြစ် ယခုနှစ်ဆန်းက အမေရိကနိုင်ငံ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့သို့ ခင်မောင်တိုးရောက်ရှိစဉ် မန္တလေးဂဇက်နှင့် အင်တာဗျုးခဲ့သည်ကို ပြန်လည်ဖေါ်ပြလိုက်ပါကြောင်း…။
အမေရိကနိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့သို့ ၂၀၁၁နိုဝင်ဘာလ၅ရက်၌ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တေးသံရှင် ခင်မောင်တိုးအား ၂၀၁၂ဇန်န၀ါရီလ၇ရက်နေ့တွင် လော့စ်အိန်းဂျလိစ်မြို့ဖျော်ဖြေပွဲ၌ ပွဲစီစဉ်သူဒေါက်တာဇော်မင်းဦး၊ မမူမူဝင်း၊စန္ဒယားအောင်ဝင်းတို့က မအားလပ်သည့် ဖျော်ဖြေရေးနှင့်လည်ပတ်လေ့လာရေးအစီအစဉ်များကြားမှ မိတ်ဆက်ပေးသဖြင့် ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာက တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
ဂီတအနုပညာကို ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းက ၀ါသနာကြီးခဲ့ပါတယ်။ ၉တန်းအရွယ်မှာ ဂစ်တာစတီးတယ်။ ၁၉၇၄-၇၅မှာ သီချင်း အပျော်တမ်းစဆိုဖြစ်တယ်။
န ခြေ့ငညန အဖွဲ့နဲ့ဆိုဘူးတယ်။ အဲဒီတုန်းက အပျော်တမ်းဘ၀ပဲရှိသေးတယ်။တကယ်တမ်း ဂီတအနုပညာလောကကို ၀င်လာတာက ၁၉၇၉မှာပါ။ ၁၉၈၀-၈၁မှာသီချင်းခွေစထွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ တောက်လျှောက်ဆိုပြီး သီချင်းခွေတွေဆက်ထွက်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေ အဲဒီကနေစဆိုဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀မှာ အဆောင်တွေက ကျွန်တော့်ရဲ့အသံစမ်းခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့။
၁၉၇၉မှာ မဇ္ဈိမလှိုင်းတေးဂီတအဖွဲ့ကို ကျွန်တော်တို့ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စပြီးဖွဲ့ခဲ့တာခုချိန်ထိပါပဲ။
သား၂ယောက်၊သမီးတယောက်၊သားအကြီးကစင်္ကာပူမှာ၊ သားအလတ်ကမလေးရှားမှာကျောင်းတက်၊ သမီးငယ်က ရန်ကုန်မှာ၊ ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ တတိယနှစ်တက်နေပါတယ်။
ဘ၀ကြီးတခုလုံးနဲ့ယှဉ်ပြောရရင်တော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလို့ ပြောရမှာပေါ့။
မှောင်ထဲသွားရင် ဓါတ်မီးပါရသလိုပဲ၊ ဘ၀အမှောင်ထဲလမ်းလျှောက်နေတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ အလင်းရောင်ယူပြီး လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ခလုတ်မတိုက်တော့ဘူးပေါ့။
ကျွန်တော်သီချင်းရေးတာ တွဲရေးတာများပါတယ်။ ကျွန်တော်သန်တာကတော့သံစဉ်ထည့်တာပါ။ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေဖန်တီးတဲ့ဘက်မှာပိုသန်ပါတယ်။
၂၀၁၂မှာ သီချင်းစီးရီးအသစ်တခုထွက်ဖို့ သွင်းလက်စလေးတွေကိုဆက်ပြီးရေးသွင်းတီးနေပါမယ်။ ကိုမောင်မောင်(အဉ္ဇလီ)အမှတ်တရပွဲလေးတခု လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ ပြည်တွင်းက စတိတ်ရှိုးပွဲတွေမှာ ဆက်ဆိုနေမယ်။ အင်္ဂလန်မှာသွားဆိုဖို့လုပ်နေတာတခုရှိတယ်။ နှစ်လယ်လောက်မှာ ဒီအမေရိကားကို တခေါက်ပြန်လာပြီးဆိုဖို့လည်းစီစဉ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့(ခင်မောင်တိုး၊ဇော်မျိုးထွဋ်၊စန္ဒယားအောင်ဝင်း၊မီမီဝင်းဖေ) နယူးယောက်မှာနိုဝင်ဘာ၁၉ရက်၊ မေရီလန်းမှာ ဒီဇင်ဘာ၁၈ရက်၊ ဖလော်ရီဒါမိုင်ယာမီမှာ ဒီဇင်ဘာ၂၄ရက်၊ လော့စ်အိန်းဂျလိစ်မှာ၂၀၁၂ဇန်န၀ါရီ၇ရက်၊ အယ်လ်ဘာနီမြို့မှာ ဇန်န၀ါရီ၁၄ရက်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြိုမှာဇန်န၀ါရီ၂၁ရက်၊ ပြီးရင်ဇန်န၀ါရီ၂၈မှာနှုတ်ဆက်ပွဲဆိုပြီးရင်မြန်မာပြည်ကိုဇန်န၀ါရီ၃၀ရက်နေ့မှာပြန်မယ်။
ပြည်တွင်းကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းမှာလဲဖြစ်တယ်၊ ကိုယ့်လူမျိုး၊ သီချင်းကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုပဲဖျော်ဖြေရတယ်။ မြန်မာစကားပြောတဲ့သူတွေချည်းပဲ။ ပြည်ပကျတော့မတူတော့ဘူး။ ပြည်ပ ပရိသတ်က ကျွန်တော်တို့ ဂီတအနုပညာသမားတွေကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားလို့၊ ကိုယ့်မြန်မာပြည်သားတယောက်ကို အားပေးချင်လို့လာကြတဲ့ပရိသတ်တွေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်အပေါ်ထားတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့အားထုတ်မှုကတော့အတူတူပါပဲ။
ပြည်ပကိုထွက်ဖျော်ဖြေတဲ့အခါ အုပ်စုလိုက်ထွက်တာများပါတယ်။ အတီးသမားတွေပါအပါအ၀င်ပေါ့။ အခုလိုအမေရိကားကို ကျွန်တော်နဲ့ ဇော်မျိုးထွဋ် ၂ယောက်တည်းအတူလာတာမျိုးလဲရှိတတ်ပါတယ်။ ပွဲစီစဉ်သူ၊ ပွဲသွင်းသူတွေရဲ့ အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ သိတတ်တဲ့အရွယ်ကတည်းက ဂီတနဲ့ပတ်သက်လာရင် စိတ်ဝင်စားတယ်။ ၀ါသနာကြီးတယ်။ ကျွန်တော်ဘ၀ကို ဂီတအနုပညာနဲ့ ရပ်တည်ခွင့်ရတာကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ဂီတအနုပညာနဲ့ရပ်တည်နေရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်၊ ဂီတအနုပညာကလူ့ရဲ့စိတ်ထားတွေကိုရှည်စေပါတယ်။သဘောထားကြီးစေပါတယ်။ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အလျောက်အနုပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရတာဟာသမ္မာအာဇီဝကျတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
နေရာတိုင်းမြို့တိုင်းကတော့သူ့ဟာလေးနဲ့သူနေချင်စရာလေးတွေ၊ကောင်းတာလေးတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့လက်တလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ အခြေအနေအဖြစ်အပျက်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကပင်ပန်းလို့ နားနားနေနေနေချင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ မေမြို့တို့ ကလော တို့ကိုကြိုက်တာပေါ့။အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတယ်။ မြို့တိုင်းမှာ ကြိုက်တဲ့အကွက်လေးတွေ၊ ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေအနဲနဲ့အများတော့ရှိကြပါတယ်။
မအောင်မြင်ခင်ကတော့ အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေရတာပေါ့။ အောင်မြင်ပြီးတော့လဲ ဒီရောက်နေတဲ့နေရာလေးကနေ နိမ့်မကျသွားအောင် ထပ်ကြိုးစားနေရပြန်တယ်။ ဒီလိုပဲအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရမှာပါ။
ကျွန်တော်က ဂီတအနုပညာလောကကဆိုတော့ သာမန်လူတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့။သာမန်လူတွေက အလုပ်ပင်ပန်းလာရင်၊ အလုပ်ကပြန်လာရင် သီချင်းလေးနားထောင်၊ ရုပ်ရှင်လေးကြည့်ပြီး အပန်းဖြေကြတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကျတော့ တနေကုန်အသံသွင်းစတူဒီယိုထဲမှာ သီချင်းတွေဆို၊ သံစဉ်ရှာ၊ သီချင်းနားထောင်၊ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် လေ့ကျင့်ဆိုတီးလုပ်နေရတော့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင်သီချင်းနားထောင်တာမလုပ်ချင်တော့ဘဲအေးအေးဆေးဆေးနေချင်တယ်။ စာဖတ်တယ်။
မဇ္ဈိမလှိုင်းတေးဂီတအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ကျောင်းသားဘ၀ကအာအိုင်တီ(ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်)ကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖွဲ့ထားခဲ့တဲ့အဖွဲ့ပါ။ ဒီနေ့အထိရှင်သန်လှုပ်ရှားသီချင်းတွေဆိုကြတီးနေကြတုန်းပါပဲ။အားလုံးဒီလူတွေချည်းပါပဲ။ ၁၉၇၉ခုနှစ်ထဲကစတွဲခဲ့ကြသူတွေပါ။လိစ်ဂစ်တာဇော်မျိုးထွဋ်၊ဘေ့စ်ရဲလွင်၊ဒရမ်တွတ်ကီ၊ကီးဘုတ်စန္ဒယားမျိုးခင်(ကွယ်လွန်သွားပါပြီ) အခုဆက်ရှင်ကီးဘုတ်သမားနဲ့ပါ။
ကျွန်တော်အမြင်က တယောက်တည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တယ်။ ဘယ်လိုဂီတအနုပညာသမားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဟစ်ပေါ့၊ ရက်ပ်တို့အပါအ၀င်ဘယ်လောက်ပဲ ဆူညံအောင်သီဆိုနေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါစေ၊ ဂီတသမားအချင်းချင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တွေးခေါ်ဆက်ဆံချင်တယ်၊ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေချင်တယ်။
ကျွန်တော်က စင်မြင့်ပေါ်မှာတောင်စကားကိုများများမပြောနိုင်တာ ဘယ်လိုလုပ်ရုပ်ရှင်ရိုက်နိုင်မှာလဲဗျာ။ရုပ်ရှင်နောက်ခံသီးချင်းတွေတော့ဆိုဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်မှာတော့ပြောတာပေါ့။ ရွှန်းရွှန်းကိုဝေလို့။ စင်မြင့်ပေါ်လဲရောက်သွားရောစကားတွေကပျောက်ကုန်တာပါ။ ကျွန်တော့အထင်တော့ ဖျော်ဖြေပွဲတွေထဲမှာစကားအများဆုံးပြောဖြစ်တာကလော့စ်အိန်းဂျလိစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
ကျွန်တော်မာနကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ စကားနည်းတာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာသဘောအရမာနဆိုတာမထားသင့်တဲ့အရာပါ။ ဒါပေမယ့်ငါမာနမကြီးဘူးဆိုတဲ့ မာနကရှိနေသေးတယ်လေ။ မာနကလူတိုင်းနဲ့မလွတ်ပါဘူး၊ တနည်းနည်းနဲ့တော့ရှိနေတာပဲ။ ရေအိုးတွေ ရေဖြည့်ထားသလိုပေါ့။ အခြေအနေအရပ်ရပ်နဲ့ အချိန်အခါလဲရှိသေးတယ်။ တခါတလေတော့လဲ လွန်လွန်ကျူးကျူးဖြစ်လာရင် ထိခိုက်လာတာတွေရှိတယ်လေ။ဒါကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာတော့ရှိသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
လော့စ်အိန်းဂျလိစ်ပွဲလေးကိုတော့ အမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဆိုတော်ဦးအံ့ကြီးလာ အားပေးတာကို မထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်၊ ဦးအံ့ကြီးရဲ့သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ‘ပြုံးတုံ့လှယ်’ကို ဦးအံ့ကြီးနဲ့အတူ စင်ပေါ်စင်အောက်အတူ ဆိုဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ အနုပညာမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့ ကိုသိန်းတန်(မြန်မာပြည်)နဲ့ နီနီဝင်းရွှေတို့ လာအားပေးကြလို့ အမှတ်တရလေးဖြစ်ပါတယ်၊ ကိုသိန်းတန်ကလက်ဆောင်လည်းပေးခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကားခရီးမှာရောက်တဲ့မြို့တိုင်းကမြို့ခံရောပရိသတ်ပါလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုကြပါတယ်။ မြို့တိုင်းမှာထူးခြားချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ နယူးယောက်မြို့ကပရိသတ်တွေကရက်ရက်ရောရောအိမ်သွန်ဖာမှောက်ချီးမြှင့်ကြပါတယ်။ အယ်လ်အေဆိုရင် ကူညီတဲ့နေရာမှာ သူမတူအောင် ကူညီကြတယ်။ ဂီတအနုပညာ ကိုတလေးတစားနားထောင်အားပေးတယ်။ ဆန်ဖရန်မှာ နယ်ခံတွေပါ ၀င်ဆိုပြီးအားပေးကြတယ်။ နေရာစုံရောက်အောင် နယ်ခံတွေက ပို့ပေးကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်၊ ဟောလီးဝုဒ်၊ ဆန်ဖရန်နားက’၁၇မိုင်’လှပတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေ၊ွသိူနညွအေန တံတား၊ အမေရိကားရဲ့အစွန်ဆုံး’၀’မိုင်တိုင်ရှိတဲု့နပျွှနျအလို့ခေါ်တဲ့ ကျူးဘားနယ်စပ်မြို့တွေရောက်ပါတယ်။ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။
အမေရိကနိုင်ငံ လော့စ်အိန်းဂျလိစ်မြို့ရောက်ရှိလည်ပတ်နေစဉ် အချိန်တိုအတွင်းရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ၏ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြေကြားပေးသည့် တေးသံရှင် ခင်မောင်တိုးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည့် ဒေါက်တာဇော်မင်းဦး၊မမူမူဝင်းနှင့်စန္ဒယားအောင်ဝင်းတို့အားအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မွေးချင်း ၁၃ယောက် (နံပါတ်၃)
အနှစ်သက်ဆုံးတေးသံရှင် ပြည်လှဖေ၊ မေရှင်၊ ဦးအံ့ကြီး
အနှစ်သက်ဆုံးတေးရေးဆရာ ကိုနေ၀င်း၊ ကိုမောင်မောင်(အဉ္စလီ)
မှတ်ချက်။ ။ မန္တလေးဂဇက် ပုံနှိပ်သတင်းစာ ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်တွင် ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီးသော အင်တာဗျူးဖြစ်ပါသည်။
ကိုတိုးကြီး (ခင်မောင်တိုး)က ကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးအဆိုတော် နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ပါ…
သူ့အသံပါဝါနဲ့ဆိုထားတဲ့သီချင်းတွေကို ကျွန်တော်လိုက်ဆိုမရပေမယ့် သူ့သီချင်းတွေထဲမှာ အရူးအမူးနှစ်သက်တဲ့သီချင်းတွေရှိပါတယ်…
အများကြီး… အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်…
ကိုတိုးကြီးသီချင်းဟောင်းတွေပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာ Music Creation တွေပိုခန်းနားလာပြီး…
တည်ငြိမ်တဲ့သူ့အသံကို ပြန်ခံစားမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးက စိတ်မကောင်းဖြစ်စေပါတယ်…
ဆည်းလည်းလေးများပြတဲ့တရားသံကို… စမ်းချောင်းလေးတို့ဇွဲနဲ့အားမာန်နဲ့… ပေါင်းစပ်ပြီးကျင့်ခဲ့ရင်…
အေးငြိမ်းတဲ့သစ်ရိပ်မှာ စွန့်လွှတ်မှုနဲ့ခွင့်လွှတ်စဉ်… ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့…
ကျွန်တော်တို့ အဆောင်ရှေ့က လမ်းဘေးညတွေမှာ
ကိုတိုးကြီးရဲ့ ညီစေမင်း ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို အမြဲဆိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်…။
အင်မတန် ညည်းလို့ ကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးအဖြစ်
ကိုတိုးကြီးသီချင်းထဲမှာ အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း…
ကျွန်တော်တို့ အကြိုက် သီချင်းပေါင်းများစွာကို ဆိုပေးခဲ့တဲ့
အဆိုတော် ခင်မောင်တိုး ကွယ်လွန်တာကြားရတော့ ကိုထီးတုန်းကလိုပဲ စိတ်ထဲမှာ နှမြောတသ ဖြစ်မိပါတယ်။
ကိုယ့်ခေတ်နဲ့ကိုယ် ဒုတိယအကြိုက်ဆုံး အဆိုတော် ကိုး….
သူ့ profile လေးဖတ်ရတော့ မွေးချင်း ၁၃ ယောက်ဆိုတာရယ်၊ အဖြူရောင် အကြိုက်ဆုံးဆိုတာရယ်ကို စိတ်ဝင်စားမိတယ်..။
အေးအေးနဲ့နားဝင်ချိုတဲ့ သူ့ သီချင်းတွေ ကျနော်ကြိုက်တယ်ဗျ..
ဆိုတာလေးလည်း ကျနော် သဘောကျတယ်ဗျာ။
မကွယ်လွန်သေးပါဘူး ဆိုတဲ့ သတင်းတွေအမျိုးမျိူး ကနေ…….
ခုတော့ တစ်ကယ်ဘဲ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီကိုး….
စိတ်ထားကောင်းဘို့အဓိက လို့ဆိုတဲ့ အတွက်ပိုလေးစားမိပြန်ပါတယ်……
မိုးသံတွေကြားမှာ ကက်ဆက်ကလေးနဲ့ သူ့ သီချင်းတွေ ဖွင့်လို့
ဟိုတစ်နေ့ကကြားရတော့ ကောလဟလ ဖြစ်နေတာ..
ဝေးခဲ့ပြီပန်းခရမ်းပြာ သီချင်းအရမ်းကြိုက်တယ် ..
သူ့ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် သူ့သီချင်းတွေကိုတော့ အားပေးမြဲပါ ..
ကတော့ ကျနော်စိတ်ကူးပေါက်ရင် ကာရာအိုကေ နဲ့ ဟဲနေကြသီချင်းလေးတွေပေါ့။
စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့မန်းလေး လမ်းမပေါါ်မှာ သွားလာနေတာကို အပြင်မှာလဲတွေ့ဘူးတော့ ပိုလွမ်း၏။
(ခိုင်ထူးထက်စောလို့သည်လောက ကိုရောက်နှင့်သူဒါပေမဲ့ ခိုင်ထူးထက်နောက်မှ လူသိများလာတဲ့သူကတော့
ဒီစာစုလေးကတော့ ကျနော်ရဲ့ နားစည်ကိုထွင်း ဂီတပိုစ်လေးမှာ ကျနော်ရေးပြခဲ့ ကိုတိုးရဲ့ဘ၀ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဘဲ။
တစ်ပတ်က စလုံးကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကမေးတယ်။ “ကိုတိုးကြီး ဆုံးသွားပြီဆို” ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်ကမကြားမိသေးပါလားလို့ပြန်ပြောမိတယ်။ အော်ခုတော့ တကယ်ကိုသွားရှာပြီကိုး။ သူ့သီချင်းတွေတော်တော်များများနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့မှာ သူ့အခွေ(တိပ်) နှစ်ခွေပါတဲ့အခွေကြီးတစ်ခုတောင်ရှိသေးတယ်။ နယ်ကအိမ်မှာကျန်ခဲ့လို့ သေချာမမှတ်မိတော့ဘူး ဘာခွေလဲဆိုတာ။
ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေဗျာ .. .ဆုတောင်းပေးပါတယ်
မဟာဆန်သူ ကိုထားလို့ ပြူတင်းတံခါးပိတ် ကြိတ်မှိတ် အိပ်သွားခဲ့ပြီပေါ့။
နောင်ဘဝ ဆိုတာရှိခဲ့ရင် လူပြန်ဖြစ်ပြီး သီချင်း ချိုချိုလေးတွေ ကို အပြန်အသက်သွင်း နိုင်ပါစေ။
အေးချမ်းရာဘုံဘဝ ကို ကူးပြောင်းပါစေ။
မန်းမြို့ မှာ မမွေးဘဲ အဲဒီမှာကြီးလို့ သူ့ဟာသူ မန်းသား လို့ ခံယူထားသူ။
သိုးဆောင်းသီချင်းဘဲ အများဆုံး နားထောင်တတ်သူ။
မြန်မာ သီချင်းထဲ ကတော့ ခင်မောင်တိုး သီချင်း ဘဲ စိုက်စိုက်မတ်မတ် နားထောင် ပြီး သီချင်း တွေ အားလုံး တစ်ပုဒ်မကျန် သိတယ်။
သိရင် အသဲကွဲ ဦးမယ်။
နှမြောစရာကြီးပါ…. ဦးတိုးကြီးရဲ့ သီချင်းတွေထဲမှာ ဆည်းလည်းလှိုက်သံကို အကြိုက်ဆုံးပါ…
ဘယ်အချိန်နားထောင်နားထောင် မရိုးနိုင်တဲ့ သီချင်းလေးပါ…
ဟိုတစ်ရက်ကလေးတင် ဦးတိုးကြီး ပြန်ကျန်းမာလာပြီ ဆိုပြီး သတင်းကို facebook မှာ ဖတ်လိုက်ရတော့ တော်သေးတယ်လို့ ထင်ထားတာ ခုတော့ တကယ်ပဲပေါ့နော်…
အနုပညာ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး နားထောင်ရုံ က လွဲ ပြီး ဘာမှ မသိပေမဲ့ ခင်မောင်တိုး သီချင်းတွေ ကို တော့ မက်မက် မောမော နားထောင် ဖူးပါရဲ့။
မိသားနှင့် ထပ်တူ လွမ်းမိပါ ဧ။်။
၀မ်းနည်း ရပါ ဧ။်။
“ပြန်မလာရင် ထာဝရခွဲခြင်းလို့ မှတ်လိုက်မယ်……
…စောင့်လို့တော့ နေရစ်အုန်း မမုန်းသရွေ့တော့ စောင့်လိုက်အုန်း”
အနုပညာသည်တစ်ယောက်၏ အဆင့်အတန်းကို သူဖြေတဲ့ အမေးအဖြေတွေမှ မြင်နိုင်၊ သိနိုင်ပါ၏။
လေးစားခဲ့ရတဲ့ ကိုတိုးကြီး တစ်ယောက်..ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ…
” ဆောင်းကြိုးရှိုက်သံ သဲ့သဲ့လေး ကြားနေတယ်”
ကျနော်ကိုယ်တိုင်က သီချင်းအေးအေးလေးတွေကြိုက်တော့ အများဆုံးနားထောင်ဖြစ်တာ စိုင်းထီးဆိုင်၊ ခင်မောင်တိုးနဲ့ ထူးအိမ်သင်သီချင်းတွေ.. ခင်မောင်တိုးရဲ့ ကြိုးကြာသံသီချင်းဟာ တနည်းပြောရရင် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားကို ဖြစ်စေခဲ့တယ်.. ဒဏ္ဍာရီသီချင်း ကတော့ အေးအေးလေးနဲ့ ကောင်းတာ
သူဆုံးပါးသွားတာ အသက်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲလို့ ကျနော် ခုထိမသိသေးဘူး.. သူကြီးသိရင်ပြောပြပေးပါဦး..
ခင်မောင်တိုးသီချင်းကို ကျွန်တော်အမြဲတန်းလိုလိုနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်… သူ့သီချင်းကအေးအေးလေး…ကြိုက်တာခပ်များများဘဲ….. .အော်….အခုတော့…သူမရှိရှာတော့ဘူး… ကျွန်တော်တို့လည်း.. ဒီလမ်းကို…. မလွှဲမသွေလိုက်ရမှာပါ… ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်…. ကိုခင်မောင်တိုးရဲ့ အနုပညာဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်ကတော့….. ဆက်လက်ရှင်သန်နေမှာပါ…
~~ကြင်နာဟန် ခင်တွယ်ဟန်~~ ညိုချောရဲ့ တရေးနိုးချိန်လေး
~~အိပ်စက်ရန် ညဉ့်နက်လို့ လက်ရမ်းကာတိုးတိုးငိုပြော ~~~ကို ရယ် ပြန်ပါတော့လားကွယ်။
ကိုယ့်ခေတ်မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ခင်မောင်တိုးရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်လေးကို အရမ်းသဘောကျခဲ့တာ။
ခင်မောင်ထူးနဲ့ ခေတ်ပြိုင်ကျော်ကြားပြီး နာမည်ချင်းလဲ ဆင်တူလို့ မကြာခဏမှားတတ်ပေမယ့်…
မဟာဆန်သူ လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ခင်မောင်တိုး ဆိုတာတော့ ဘယ်တော့မှ မမှားဘူး။
အမေကတော့ အသဲကွဲနေလေရဲ့ စုတ်တသတ်သတ်နဲ့ သူက ဦးတိုးကြီး သီချင်းတွေ သိပ်ကြိုက်တာ
ကျမကတော့ ခင်မောင်တိုးကို မဇ္ဈိမလှိုင်းတေးဂီတအဖွဲ့ နဲ့မှတွဲကြိုက်တာ.. သူ့သီချင်းတပုဒ် ခေါင်းလောင်းလေးများပြတဲ့တရားသံလို…ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို ဂီတာတီးလို့ကောင်းလို့အမြဲတီးဖြစ်တယ်…သူတို့အဲဒီသီချင်းတီးထားတာ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့အရမ်းကောင်းတယ်. အဲဒီဝိုင်းက ဆံပင်ရှည်ရှည်အသက်ကြီးကြီးပလေယာကြီးတွေကို အရမ်းသဘောကျတာ…ဦးဇော်မျိုးထွဋ်ရဲ့အတီးကိုလည်း အရမ်းသဘောကျတယ်။
“ဒီတစ်ညတော့မင်းရင်ခွင်မှာအိပ်ဖို့ရောက်လာပြီ အချစ်ကလေးရယ် တံခါးဖွင့်ပါကွယ် “….တဲ့
အခုတော့လဲ ဖွင့်ခိုင်းစရာမလိုတဲ့ တံခါးထဲ ဖြတ်ပြီးဝင်သွားပြီဘဲလေ ….
တစ်နေ့မှာလူတိုင်းမလွဲမသွေဖြတ်ရမှာ ဆိုပေမဲ့လည်း အချိန်စောနေသေးတယ် လို့ထင်မိတယ်
ငယ်တုန်းက နားထောင်ခဲ့ရတဲ့ ပန်းချစ်သူ ပိုင်ရှင် ကိုတိုးကြီး ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေဗျာ
ပန်းချစ်သူဆိုရင် ဒဏ္ဍာရီဇာတ်ဝင်ခန်းလေး ပြေးမြင်တယ်ဗျာ။
မေသန်းနု နဲ့ ဇင်ဝိုင်းကို သနားလိုက်ရတာ။
အခုတော့ သီချင်းပိုင်ရှင် သွားလေသူကြီးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်
အရင်တစ်ခါက “မောင့် လပြည့်ဝန်း”
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာ ..
မြန်မာ့ ဂီတလောက အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းဖွယ် သတင်း …
ဟိုတုန်းက ညနေခင်းများမှာ ကြည်ပြာ ကန်နံဘေး သံစဉ်လှိုင်းခတ်ခဲ့တဲ့ ကိုခင်မောင်တိုး တစ်ယောက်
ကောင်းရာ သုဂတိ ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရဲ့ ခင်ဗျာ …